DLULA ISardinia Photoreal FSX & P3D part2 - Rikoooo
Usayizi 1.43 GB
Play 46 223
Ingxenye yesibili ye-mega isithombe sangempela se-Sardinia se FSX ne-Prepart3D v1 & v2. Ukuze uthole imininingwane engaphezulu mayelana nokubuka kwenkundla ikhasi okuyingxenye 1. Lokhu nobuhle bendawo ihlukaniswe yaba izingxenye 4 ngenxa yobukhulu bayo okungukuthi licishe lifane, ezingaphezu kuka 5 GB isiyonke. 4 izingxenye zimelela Sardinia lilonke. Nokho, By ukulanda zonke izingxenye uyothola indawo ephelele, amaqembu akuzona sincike omunye komunye, futhi ngaleyo ndlela ingasetshenziswa ngokwehlukana.
Lokhu ukulanda 1 esindayo kakhulu.43 GB uma ungeyena Jumbo Ilungu alindele ukuba ulinde amahora ambalwa thwebula .. Le ezinobuhle waba yizinqamu 2, emva thwebula unzip konke kufolda bese uchofoza on sardinia_photoreal_part2.exe ukuqala ukufakwa okuzenzakalelayo.
Le ngxenye kuhlanganisa izindawo ezilandelayo: Barony, Ogliastra, Posada, Gulf of Orosei, Cala Gonone, Arbatax (nge LIET sezindiza), Villasimius.
Ngezansi, lena Indawo ehlanganiswa wonke ezinobuhle (4 izingxenye) kulandele endaweni ehlanganiswa Ingxenye 2.
Qedela scenery Scenery inxa 2 (lokhu thwebula)